Malunga nathi -Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co., Ltd.
Wamkele umthengi omtsha narhoqo ukuba axoxisane kwaye abonisane!
I-Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co, Ltd.yinkampani enkulu yezemigodi edibeneyo nokumbiwa kwemigodi kunye nokulungiswa kwezimbiwa ze-perlite, iiminerali ze-zeolite, izimbiwa ze-bentonite, kunye neeminerali zeceramic. Iimveliso eziphambili zenkampani kubandakanya uthotho lwe-zeolite: i-zeolite powder, amasuntswana e-zeolite, Imithombo yeendaba ye-zeolite yeefilitha, ii-zeolite sieve zemolekyuli, njl .; uthotho yodongwe: yodongwe umgubo, yodongwe umhlaba ekrwada, yokugquma yodongwe kunye uhombiso ibhodi ezihlangeneyo, njl .; uthotho lwe-perlite: amasuntswana e-perlite, i-perlite ore, uncedo lwecebo lokucoca ulwelo, i-hydrophobic perlite, i-perlite ye-horticultural, njl .; umgubo weBentonite, ubuhlalu obudadayo, ubuhlalu obungenanto, ubuhlalu be-ceramic, i-ceramsite, njl.
I-Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co, Ltd.izimisele ukusebenzisa imveliso ekumgangatho ophezulu yezimbiwa ukunceda i-China kunye nophuhliso lwezoqoqosho kwihlabathi, kunye nokwenza ixabiso elikhulu kubatyali mali, abasebenzi bamashishini kunye namanye amaqela ahambelana noko. Wamkele umthengi omtsha narhoqo ukuba axoxisane kwaye abonisane!
Inkampani ibekwe kwindawo yoPhuhliso lweMigodi engeyoyentsimbi eShangtianti, kwisiXeko saseXinyang, kwiPhondo laseHenan. I-Shanghai-Shaanxi Expressway kunye neBeijing-Hong Kong-Macao Expressway ziwela apha, kwaye uthutho lulunge kakhulu.
Inkampani yasekwa ekuqaleni ngo-1995. Emva kweminyaka yokuhlola kunye nophuhliso, ngo-2017, ngenkxaso eyomeleleyo kurhulumente, yaphuculwa yaya kwindawo enkulu yokusebenza kwezimbiwa kwindawo yengingqi. Ukugubungela indawo engaphezulu kwe-20,000 yeemitha zesikwere, inkampani ineendawo ezimbini ezingezizo zesinyithi phantsi kwesambrela sayo sokuqinisekisa ukubonelelwa okwaneleyo kubathengi ngelixa kuqinisekiswa nomgangatho wemveliso.
Inkampani iseke ubudlelwane bexesha elide lokuphumelela kunye nokuphumelela kunye namashishini amaninzi asekhaya nakwamanye amazwe anegama elihle kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu. Umzekelo: (Iqela le-US SUM, iQela leWanda, iQela leVanke, iqela lePoly, iGreenland Group, iSinopec, iChina China Petroleum Corporation, iQela loPhuhliso lweoyile neRhasi laseNtshona, iNkampani ye-Karamay yeoyile kunye neNkampani yeRhasi, iQela leSauce laseHaiti, iqela leTsingtao. Iqela leMithi emithathu, Iqela leJiabaoli, Iqela leNippon, Iqela leChia Tai, Iqela leCOFCO, Iqela lokuLondolozwa Kwezilwanyana eChina)